July 29, 2021 » Daawo: Dood Ka Dhalatay Coldoon Oo U Istaagi Waayey Calanka ... » Axadle Wararka Maanta
Hargeysa (Axadle) – Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah weriye sama-fale ah oo ka howlgala gobollada waqooyi ee Gobaladda Waqooyi ayey saacadihii lasoo dhaafay hadal-heyntiisu aad ugu faaftay baraha bulshada, kadib markii uu xalay u istaagi diiday astaanta calanka Gobaladda Waqooyi.
Cabdimaalik Coldoon oo la hadlay TV-ga Horn Cable ayaa ka jawaabay sababta uu ugu istaagi waayey heesta calanka Gobaladda Waqooyi, markii laga yeeriyey munaasabad lagu soo bandhigayey Buug uu qoray Abwaan Maxamed Warsame Hadraawi.
Sawirka Cabdimaalik oo fadhiya iyo dadkii kale ee ka soo qeyb galay munaasabadaas oo u istaagay astaanta calanka ayaa aad loogu faafiyey baraha bulshada, waxayna dadka badankood tallaabadaas ku macneeyeen in Cabdimaalik uusan aqoonsaneyn calanka Gobaladda Waqooyi.
“Wax kasta oo aan qabaneyno waa in aan u eegno waxa ay ka qabto diinteena Islaamka, laakiin aanaa ka eegin dadku saas ayey sameeyeene aan ku daysano, anigu waxa aan ku dhaqmay waxa aan ka fahmay diinteena Islaamka, waxaana diinteena ka fahmay in Khushuuca uu Ilaahey iska leeyahay,” ayuu yiri Cabdimaalik Coldoon.
Sidoo kale Coldoon ayaa sheegay in calan ama cid kale aysan u qalmin in loo Khushuuco, “Waxaan ugu istaagi diiday cabsi aan nafteyda uga baqayey in aan ku dhaco wixii ilaahey iga reebay, taxadar ayey iga aheyd, waana in bulshadu ay ku baraarugto arrintaan,” ayuu yiri.
Mar wax laga weydiiyey guuxa bulshada ee ah in Cabdimaalik uusan aqoonsaneyn jiritaanka calanka Gobaladda Waqooyi ayuu ku jawaabay, “Maya calamadu waa isugu keymid, ma jiro calan aan u istaagi lahaa, Ilaahey dartiis ayaan wax u naceynaa, ilaahey dartiis ayaan wax u jeclaaneynaa,” ayuu yiri Cabdimaalik Coldoon.